Iyini futhi yakhiwa kanjani imisinga ye-convection? Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela uzwile imibukiso ye-convection lapho sesikhulume ngokuhlukile izingqimba zomhlaba. Uma sikhuluma ngama-convection currents ngaphakathi komhlaba sikhuluma ngomehluko wobuningi bezinto ezakha ingubo yomhlaba. Kukhona nemisinga ye-convection njengoketshezi oluhambayo ngoba kunokwehluka kwezinga lokushisa.
Kulesi sihloko sizokutshela konke ngakho.
1 Yimiphi imisinga ye-convection
2 Kungani ama-convection currents form
Yimiphi imisinga ye-convection
Lapho sithola uketshezi oluhambayo nolunyakazayo ngoba kukhona umehluko kwezinga lokushisa noma lokuminyana esinemibono ehambisa umbonelo. Ukuze lolu hlobo lwamanje lube khona, kufanele kube noketshezi, kungaba uketshezi noma igesi. Lokhu kungenxa yokuthi izinhlayiya ezingaphakathi kokuqinile zilungisiwe futhi azihambi, ngakho-ke, awukwazi ukubona ukugeleza ngenxa yokwehluka kukho kokubili ukushisa nobukhulu.
Umehluko phakathi kwamazinga okushisa endawo eyodwa noma enye ngaphakathi kwento efanayo yilokho okubangela ukudluliswa kwamandla kusuka endaweni enkulu kuye kulencane. I-Convection yenzeka kuze kube khona ukulingana okuphelele. Lapho le nqubo yenzeka ngenxa yokudluliswa kokushisa, kwakheka imisinga yendaba esuka kwenye indawo iye kwenye. Ngakho-ke, kubhekwa njengenqubo yokudlulisa okuningi.
Imisinga ye-Convection evela ku- ngokwemvelo zibizwa nangokuthi i-convection yamahhala. Uma, ngokwesibonelo, lokhu kuhanjiswa kwenzeka ngaphakathi kwento efana nefeni noma ipompo, kubizwa ngokuthi yi-convection ephoqelelwe.
Kungani ama-convection currents form
Lolu hlobo lwesenzeko lwenzeka ngenxa yomehluko wokushisa obangela ukuthi izinhlayiya zihambe zenze i-current. Le yamanje ingenzeka futhi uma kunomehluko wobuningi. Imvamisa ukugeleza kuya ohlangothini kusuka lapho kunamazinga aphezulu okushisa noma ukuminyana kuya lapho kunamazinga amancane okushisa nobuningi. Le misinga ye-convection nayo yenzeka emoyeni. Ingcindezi yasemkhathini igeleza ibheke ohlangothini olusuka lapho kunokuminyana okuningi kuye lapho kuncane khona. Endabeni yeziphepho, indawo yengcindezi ephansi izoba isisulu sokuqondiswa ngumoya.
Lokhu yikho okwenza indawo yengcindezi ephansi ibe yindawo lapho kunezimvula ngisho neziphepho. Lapho okwamanje kudlulisa ukushisa kusuka endaweni yamandla aphezulu kuya endaweni yamandla aphansi, le convection iyenzeka. Kumagesi nasesihlabathini se-plasma nasethempelini eliphakathi nendawo okuholela nasezifundeni ezinamandla aphezulu naphansi, lapho ama-athomu nama-molecule anyakaza khona ukugcwalisa izindawo ezingenalutho. Kungashiwo ngendlela efingqiwe ukuthi uketshezi olushisayo luyakhuphuka ngenkathi uketshezi olubandayo lucwila ngokuqhubekayo.
Lokhu kuzokwenzeka ngokwemvelo ngaphandle kokuthi kube nomthombo wamandla, njengokukhanya kwelanga noma umthombo wokushisa, oguqula inkomba yale misinga. Imisinga ye-Convection yenzeka kuze kube yilapho amazinga okushisa nobukhulu bufana. Ukuthi amazinga okushisa kanye nobukhulu bekufana ngokuphelele ezingxenyeni zomhlaba kunzima kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi uqweqwe lwamazwekazi lusendalweni eqhubekayo nasekubhujisweni, ngakho-ke, okwesithupha ngokuqhubekayo kufaka izinto zokushisa nokuqina okuhlukile kwengubo yomhlaba. Ukungakhulumi ngamazinga okushisa ngaphakathi kwengaphakathi langaphakathi.
Izinto ezisenkabeni yangaphakathi yeplanethi yethu ziqinile ngenxa yengcindezi enamandla ekhona enkabeni. Ingqikithi engaphandle, ngakolunye uhlangothi, inezinto zoketshezi ngoba, yize amazinga okushisa ephezulu kakhulu, ayikho ingcindezi enamandla kangako.
Ngenxa yalokhu ukwethulwa okuqhubekayo kwezinto zokwakha nokwehluka kwezinga lokushisa nokuxinana kuphakeme kakhulu, kukhona lawa abizwa ngokuthi yi-convection currents yengubo futhi ayimbangela yokuhamba Amapuleti eTectonic.
Ukuze sikwazi ukubeka izibonelo ezithile ezenza konke lokhu kucace bha, sizochaza okulandelayo: ososayensi abaningi bahlaziya amandla asebenza kuketshezi ukuze bakwazi ukuwahlukanisa futhi baqonde ukuhanjiswa. La mandla angafaka amandla adonsela phansi, ukungezwani komhlaba, izinkambu zikagesi, ukudlidlizela, umehluko wokuhlushwa, nokwakhiwa kwezibopho phakathi kwama-molecule. Le mizila ye-convection ingenziwa imodeli futhi ichazwe kusetshenziswa izibalo ezihlukile zokuhamba kwesikali.
Isibonelo samanje se-convection kungaba ukuthi kukhiqizwa emanzini abilayo ebhodweni. Lapho nje kufakwa uphizi noma ucezu lwephepha ukulandelela ukugeleza kwamanje, ungabona ukuthi umthombo wokushisa osengxenyeni engaphakathi yomgodi ushisa kanjani amanzi futhi uwunike amandla, okwenza ama-molecule ahambe ngokushesha. . Lapho okokusebenza kwethulwa ezingeni lokushisa eliphansi kuthinta nobuningi bamanzi. Njengoba amanzi ehambela phezulu ashiya amandla athile aphuma ngesimo somusi. Umhwamuko upholisa indawo ngokwanele ukuze amanye ama-molecule abuyele phansi ebhodweni.
Esinye isibonelo samanje se-convection yomoya oshisayo yilesi esenzeka endlini lapho umoya ukhuphuka ophahleni noma ophahleni lwendlu. Lokhu kungenxa yokuthi umoya oshisayo awuminyene kakhulu kunomoya obandayo ngakho-ke uvame ukukhuphuka. Njengoba sishilo ngaphambili, singakubona futhi nomoya. Ukukhanya kwelanga nemisebe yelanga kushisa umoya osemkhathini kusungula umehluko wezinga lokushisa owenza umoya uhambe. Ukwehla kwesilinganiso sokwehla kwamazinga okushisa phakathi kwendawo kuya kwenye, kukhula umbuso womoya. Lokhu kungenxa yokuthi umoya omningi uzosuka endaweni yengcindezi ephezulu uye endaweni yengcindezi ephansi.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zibonelo sekucacile kakhulu ukuthi iyini imisinga ye-convection.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Imisinga ye-Convection